Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 47
Ny olombelona dia mikrokosmin'ny macrocosm, an'izao tontolo izao amin'ny miniature? Raha izany, ny planeta sy ny kintana hita maso dia tokony ho hita ao aminy. Aiza izy ireo?
Ireo mieritreritra amin'ny fotoana samy hafa sy amin'ny fomba isan-karazany, hoy ny olombelona dia hita eo amin'ny olombelona ny tontolo. Raha ny filazalazana na raha ny tena marina dia mety ho marina izany. Tsy midika akory izany hoe manana izao rantsan-tanana sy rantsan-tongotra sy izao ny olombelona ary ny volon-doha sy ny volo eo an-doha, ary tsy noforonina araka an'izao tontolo izao ankehitriny ny zavaboary, fa midika izany fa ny asan'ny an'izao rehetra izao dia mety ho endrika sy aseho ao amin'ny olona amin'ny alàlan'ny taovany sy ny mony. Ny taova ao amin'ny vatan'ny olona dia tsy natao hamenoana habakabaka, fa hanatanteraka asa sasany amin'ny ankapobeny ara-toekarena sy mahasoa ny zavamananaina. Io ihany koa dia azo lazaina hoe momba vatana ao amin'ny habakabaka.
Ny tara-pahazavana mamirapiratra ary ireo orana mamirapiratra miakatra any an-danitra dia ny media izay iasan'ny hery manerantany amin'ny vatan'ny habakabaka, araka ny lalàna eran-tany sy ho an'ny fiantohana ankapobeny sy ny toekarena. Ny taova anatiny, toy ny taovam-pananahana, ny voa, ny spleen, ny pancreas, ny atiny, ny fo ary ny havokavoka dia lazaina fa iraka ary mitondra fifandraisana mivantana amin'ireo planeta fito. Ny mpahay siansa sy ny mystika toa ny Boehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg, ireo filozofa amin'ny afo sy alchemist, dia nanonona ny taova sy ny planeta izay mifanakaiky. Tsy mitovy daholo ny filazan'izy ireo rehetra fa manaiky koa izy fa misy hetsika mifamadika sy fifandraisana eo amin'ny taova sy ny planeta. Rehefa fantatry ny saina fa misy ny fifanarahana dia tsy maintsy, ny mpianatra dia, raha te hahalala, dia mieritreritra sy hamaha ireo taova izay mifanentana amin'ny planeta manokana, ary ny fomba ifandraisany sy miasa. Tsy afaka miankina amin'ny latabatra iray hafa amin'ity raharaha ity izy. Ny latabatra fanoratana mety ho mety ho an'ilay nanao azy; mety tsy ho marina amin'ny hafa. Ny mpianatra iray dia tsy maintsy mahita ny taratasiny.
Raha tsy mieritreritra ianao dia tsy hisy hahafantatra ny fomba itovizan'ireo zavatra iraisampirenena sy mifandray amin'ny faritra tsirairay ao amin'ny vatana, na inona na inona lazain'ny hafa momba azy. Tokony ho tohizana ny fieritreretana mandra-pahafantarana ny foto-kevitra. Izay mifanandrify amin'ny antokon-kintana, ny felana kintana, ny nebulae eny amin'ny habakabaka, dia mihetsika ao amin'ny vatan'ny olona toy ny plexuse, nerve ganglia, nerve crossings. Ireo felana na fiampitana ao amin'ny vatana dia mamoaka jiro, aotra amin'ny nerve. Io any an-danitra dia lazaina ho fahazavana kintana ary anarana hafa. Toa hoentina tsara sy mankasitraka ny mpanamory ilay izy, fa raha mieritreritra ao amin'ny vatany izy mandra-pahitany ny toetran'ny foibe sy ny fantsony, dia hanova ny teoria-ny momba ny astronomia izy. Fantany hoe inona ny kintana eny amin'ny lanitra ary afaka mahita azy ireo ho foibe ao amin'ny vatany.
Inona no atao hoe fahasalamana amin'ny ankapobeny? Raha toa ny fahasamihafan'ny hery ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy ataon'ny olombelona, ​​ahoana no aharetan'ny fifandanjana?
Ny fahasalamana dia fahasalamana sy fahatsentsenan'ny vatana ao anaty rafitra sy fiasa ao aminy. Ny fahasalamana amin'ny ankapobeny dia ny fandidiana ny vatana iray amin'ny asa izay iasàna azy, tsy misy fanakorontanana ny fiasanany na ny fanimbana ireo faritra aminy. Ny tanjaka dia novolavolaina sy nokolokoloina ho vokatry ny fahasalamana. Ny tanjaka dia tsy zavatra ivelan'ny fahasalamana, na tsy an'ny fahasalamana. Ny fahasalamana dia voatahiry amin'ny alalan'ny fikajiana ny hery na ny angovo novolavolaina, ary ny hetsika mifamadika eo anelanelan'ny faritra amin'ny vatana sy amin'ny vatana iray manontolo. Mihatra amin'ny saina sy ny toetra ara-panahy amin'ny olombelona izany, miaraka amin'ny vatan'olombelona, ​​ary koa amin'ny olona biby tsotra. Misy ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-panahy satria misy fahasalaman'ny vatana. Ny fahasalaman'ny besinimaro dia tazomoka rehefa manao ny asany amin'ny lafiny rehetra sy ny mahasoa ny manontolo ny ampahany tsirairay amin'ny fampifangaroana. Mora takatra ny fitsipika fa sarotra arahina. Ny fahasalamana dia mahazo sy mihazona amin'ny ambaratonga izay manao ny tsara indrindra mba hananana fahasalamana, ary manao izay fantany indrindra mba hitazomana azy io.